I-iPhone 13 nakho konke okwethulwe yi-Apple ku-Keynote yayo | Izindaba zegajethi
I-iPhone 13 nakho konke okwethulwe yi-Apple ku-Keynote yayo
UMiguel Hernandez | 16/09/2021 12:32 | Imicimbi, General
Inkampani yaseCupertino ibone kufanele ukuyigubha #AppleEvent minyaka yonke lapho ikhombisa khona ukugqama kwayo ngocingo lweselula, i-iPhone. Kulesi senzakalo, uhla lwe-iPhone 13 lunikezwe ngezinto eziningi ezintsha, kepha-ke aluzi lodwa.
Ngaphezu kwe-iPhone 13, i-Apple yethule i-Apple Watch Series 7 kanye ne-AirPods yesizukulwane sesithathu, ake sibheke yonke imikhiqizo yabo. Sazise ngokuningiliziwe amadivayisi i-Apple ehlose ukuphatha ngawo imakethe kulo nyaka ka-2021 kanye nangonyaka omkhulu ka-2022, ngabe le mikhiqizo izokwakha ngokwanele?
1 I-iPhone 13 nakho konke ukwahluka kwayo
2 Uchungechunge lwe-Apple 7, inguquko enkulu kakhulu
3 I-iPad Mini entsha nokuvuselelwa kwe-iPad 10.2
I-iPhone 13 nakho konke ukwahluka kwayo
Ake siqale kuqala ngale iPhone 13 nazo zonke lezo zici omunye nomunye azokwabelana ngazo. Eyokuqala yiprosesa elidumile le-A15 Bionic, le processor eyizinikele eyenziwe yi-TSMC Ihlose ukuba namandla amakhulu emakethe ngenxa yobuchwepheshe bayo obudidiyelwe be-GPU namandla aluhlaza. Ngokwengxenye yayo, wonke amadivayisi azoba ne-new I-Face ID 2.0 kanye notch enziwe usayizi ofinyelela ku-20% omncane ukuze asebenzise kangcono isikhala futhi anikele ngokuphepha okukhulu lapho uvula ubuso, isici esifunwe kakhulu ngabasebenzisi, lapho isipikha sihlanganiswa emaphethelweni aphezulu wesikrini.
Ngakolunye uhlangothi, manje wonke ama-iPhones azoba nenkokhiso efanayo ye-18W ngekhebula ne-15W ngeMagSafe, kanye nokuhlanganiswa ekwakhiweni kabusha kwemikhiqizo MagSafe, ukuhambisana nayo nenguqulo yangaphambilini yeshaja engenantambo i-Apple eyenze yaba semfashinini kangaka. Ngokufanayo, maqondana nokuxhumana okungenantambo U-Apple uthathe isinqumo sokubheja kunethiwekhi ye-WiFi 6E, ukuvela okuncane kwenethiwekhi eyaziwayo ye-WiFi 6, kuthuthukisa ukuzinza nokudluliswa kwedatha, ngaleyo ndlela izibeke njengedivayisi ehamba phambili ngokobu buchwepheshe.
Ngezizathu ezisobala, Ukubheja kwe-Apple kumapaneli we-OLED Kuwo wonke amadivayisi ayo, esimweni se-iPhone 13 Mini kuzoba ngamasentimitha angu-5,4, azokhuphukela ku-6,1 amayintshi we-iPhone 13 ne-iPhone 13 Pro bese enyukela kuma-intshi angu-6,7 kuhlelo lwe-Pro Max lwe-iPhone 13. Njengezici ezivelele, i-iPhone ebangeni layo le-Pro izofaka isilinganiso sokuvuselela esingu-120 Hz, esinye sezici ezifunwa kakhulu abasebenzisi eminyakeni yamuva.
Kepha amandla okugcina ukusetshenziswa kwe-128 GB njengokujwayelekile kufika ngokuqinisekile.
I-iPhone 13 / Mini: 128/256/512
I-iPhone 13 Pro / Max: 128/256/512 / 1TB
Okufanayo kwenzeka ngamabhethri, ukubheja kwe-Apple kuvuliwe amandla aphakeme kunawo wonke owasebenzisile kuze kube manje, yebo, ngeke inikeze ishaja efakwe ebhokisini le-iPhone.
I-iPhone 13 Pro: 3.100 mAh
Ngokuyinhloko sinezinguquko kukhamera enkulu okuyi- I-Wide Angle ine-MP eyi-12 enembobo f / 1.6 kanye ne-advanced optical image stabilization system (OIS). Inzwa yesibili iyi- I-12 MP Ultra Wide Angle ukuthi kuleli cala iyakwazi ukuthwebula ukukhanya okungu-20% ngaphezulu kunenguqulo yangaphambilini yekhamera nokuthi ine-f / 2.4. Konke lokhu kuzosivumela ukuthi siqophe ku-4K Dolby Vision, ku-Full HD kuze kufike ku-240 FPS futhi sisebenzise nemodi ye- "cinematic" enezela umphumela ukufiphala nge-software, kepha irekhoda kuphela kuze kufike kuma-FPS angama-30.
I-iPhone 13 / Mini: Inzwa eyinhloko + i-Ultra Wide Angle
I-iPhone 13 Pro / Max: Inzwa enkulu + i-Ultra Wide Angle + i-Telephoto + LiDAR yokukhulisa kathathu
Ngamanani aphakathi kwama-euro angama-709 no-1699 Ngokuya ngedivayisi ekhethiwe, zingagcinwa ngoSepthemba 16, ngokulethwa kokuqala kuqala ngoSepthemba 24.
Uchungechunge lwe-Apple 7, inguquko enkulu kakhulu
I-Apple Watch ibilokhu inomklamo obonakalayo osushintshiwe waba yize eminyakeni edlule, wakha indinganiso yomkhiqizo nochungechunge lwamathrendi azibeke njengophawu lomkhiqizo. Kodwa-ke, i-Apple inqume ukungavuseleli ukwakheka kwe- Uchungechunge lwe-Apple 7 ukukunika umuzwa wokuqhubeka nge-iPhone yakho efunwa kakhulu, i-iPad, neMacBook. Nakhu ukuthi i-Apple ishiye amajika we-Apple Watch esebenza kanjani ukunikeza umklamo ocishe ufane nalowo we-Apple Watch Series 6, ikakhulukazi esimweni, ngoba isikrini manje sifinyelela ngokweqile futhi siyabonakala ezinhlangothini, okuthile labo basebenzisi ababekade bebafuna kudala.
Zimbalwa izici ezintsha ezingeni lobuchwepheshe elingaphezu kweprosesa elisha namakhono wokucubungula, zihlala ziyizici ezibalulekile ze-Apple Watch Series 6 njenge-electrocardiogram kanye ne-altimeter. Kwakhulunywa okuningi ngenzwa yokushisa komzimba engazange ifike ekugcineni. Uhla lwayo olusha futhi olunemibala egqamile aluveli esandleni sokuvuselelwa ngosayizi, yize imiphetho yehliswa ngo-40%, yize sizoba nezinguqulo zensimbi, i-titanium ne-aluminium. Intengo izoqala kuma-euro angama-429 ngohlobo lwe-austere lwedivayisi futhi sizoqhubeka nokuba nezinguqulo nge-LTE noma ezizokhawulelwa kuxhumano lwe-Bluetooth + WiFi ngokuya ngezidingo zomsebenzisi ngamunye. Khonamanjalo, i-Apple ayinikanga izinsuku eziqondile zokwethulwa kwayo, bazoyishiya ngokuwa.
I-iPad Mini entsha nokuvuselelwa kwe-iPad 10.2
Kuqala kuza i-iPad Mini entsha ethola ukusebenza kwe-iPad Air, isikrini esiseceleni esinemiphetho emincanyana namakhona ayindilinga, ama-intshi angu-8,3 ngaphandle kwe-ID ye-Face edidiyelwe, ne-Touch ID kunkinobho yamandla. Kule Mini entsha ye-iPad sinefayela le- i-A15 Bionic entsha, iprosesa elizokwenyuka ngendlela ku-iPhone 13 no-13 Pro, kanye nokuxhuma kwe-5G kutholakala ngqo kukhebula le-USB-C ukuxhuma izesekeli.
Ngokuqondene ne-10.2 iPad, igcina intengo yayo futhi ayenzi lutho olusha ezingeni lokuklama, kepha izokwakha ikhamera entsha ye-12MP FaceTime enenzwa ye-122º Wide Angle kanye ne-Apple's A13 Bionic processor.
Zonke lezi yizindaba inkampani yaseCupertino eyethule ngesikhathi somcimbi wayo namuhla, izotholakala maduze ezindaweni eziyinhloko zokuthengisa kanye nasesitolo se-Apple ngokomzimba naku-inthanethi, yize ungenza ukubhuka okujwayelekile. Kuyaziwa ukuthi i-Apple imvamisa inikela ngamasheya "amancane" kulawa madivayisi ngosuku lwawo lokuqalisa, sinethemba lokuthi ngeke siyibone imigqa ejwayelekile eSitolo se-Apple njengasesikhathini sangaphambi kwe-COVID.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-iPhone 13 nakho konke okwethulwe yi-Apple ku-Keynote yayo
USonos umemezela iBeam yesizukulwane sesibili, ukushaya kwentengo